Home CLASSIC FOOTBALLER Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB waxay soo bandhigeysaa sheekada Full Story of Legend Football waxaa sida ugu wanaagsan loo yaqaan Nickname; "Qofka aan duuliyaha lahayn ee Holland". Dabeecadeena Dennis Bergkamp oo ah akhbaar aan caadi aheyn oo xaqiiqo ah ayaa xaqiiqda kuugu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof walba wuu ogyahay taariikhdiisa taariikhda Arsenal, laakiin dhowr ka mid ah tixgelinayaan nooca Dennis Bergkamp Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Hore iyo Qoyska
Dennis Nicolaas Maria Bergkamp wuxuu ku dhashay maalintii 10th May May 1969 ee Amsterdam, Netherlands. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Tonnie Bergkamp iyo aabbe, Wim Bergkamp (koronto yaqaan). Bergkamp wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee Wim iyo afar wiil oo Tonnie Bergkamp ah.
Dennis waxaa lagu soo bandhigay xaafad shaqeyneysa, iyadoo qoysku doonayo in uu gaaro heerka fasalka dhexe. Aabihiis, oo ah koronto yaqaan iyo kubbadda cagta ee horyaalada yaryar, ayaa ugu yeeray sharaf uu u leeyahay weerarka Scottish Denis Law ee hoos ku sawiran.
Si ay u hoggaansamaan Nederlandka loo yaqaan caadada magaceeda, waxa dheeriga ah "n" ayaa lagu soo daray magaca koowaad ee Bergkamp aabihiis ka dib markii aan la aqbalin diiwaan-hayaha.
Bergkamp ayaa la soo qaaday Roman Catholic qoyskiisa oo si joogta ah uga qaybqaatay kaniisadda intii uu carruurnimadiisa ahaa. Inkastoo sanado ka dib uu sheegay in booqashooyinka kaniisadda ayan raali ka ahayn isaga, Bergkamp wali wuxuu sii wadaa iimaankiisa. Sida laga soo xigtay Bergkamp, ​​geesinimada kubada cagta carruurnimadeeda waa Glenn Hoddle, oo uu ku faraxsan yahay taabashada jilicsan ee jilicsan.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Xirfadda Soo-koobista
Bergkamp waxaa loo soo bandhigay habka dhalinyarada Ajax, isagoo ku biiray kooxda da 'da' 11.
Wuxuu baranayay qaab ciyaareedka garoonka dhexdiisa tan iyo markii ay doonayeen inay bartaan inay ciyaaraan boos kasta. Markii uu ciyaarayay daafaca ayaa caawiyey markii uu si wacan u ogaa sida daafaca ka soo horjeeda uu isku dayi doono inuu joojiyo. Aqoontaasi waxay ka caawineysaa inuu ka hortago wax kasta oo uu udhaqaaqayo daafaciisa. Taasi, oo ay weheliyaan hal-abuurka ku-dhow-aan-u-dhicin, ayaa ka dhigey qof aad u adag inuu ilaaliyo.
Xilliyadii danbe, Bergkamp wuxuu udub dhexaad u ahaa ciyaaryahan Ajax ah. Tani waxay soo afjartay xilligii guusha ee kooxda, kaasoo ku guuleystay horyaalka Eredivisie xilli ciyaareedkii 1989-90 markii ugu horeysay muddo shan sano ah.
Waxa uu joogay Ajax ilaa '93, markii uu go'aansaday inuu doonayo inuu koontaroolo kooxdii uu la ciyaaray iyo ka horjeeda. Talyaaniga iyo Serie A ayaa ahaa mid xoogan, ka dibna waxa uu door biday inuu ka ciyaaro Internazionale Milano kooxda Juventus. Ma aheyn wax taam ah sababtoo ah saxaafada Talyaaniga ma aysan ogeyn waxa ay ka sameynayaan dabeecadiisii ​​hore ee garoonka dhexdiisa iyo xitaa ku calaamadiyay "Indhi la'aan." Waxay ahaayeen kuwo naxariis daro mararka qaarkood isaga oo dhibaya.
Labo sanno oo uu kubbada ku ciyaari lahaa Italy ayaa cadeeyay inuu ku filan yahay Bergkamp wuxuuna ku biiray Arsenal ee 1995. Inta kale, sida ay sheegaan, hadda waa taariikh.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Nolosha Xiriirka
Markii hore ee xirfaddiisa, waxa ay caddaynday in qayb kasta oo fiican oo ka mid ah lugta Bergkamp uu u baahan yahay qofka saxda ah si uu u dhejiyo go'aankiisa. Farshaxankeeda kubadda cagta ayaa waxaa soo buuxiyay gabadh qurux badan oo cajiib ah. No kale oo ka duwan model Dutch, Henrita Ruizendaal, jacaylka noloshiisa.
Bergkamp wuxuu guursaday Henrita Ruizendaal tan iyo 16 June 1993. Hoos waxaa ku yaal sawirka arooska.
Lamaanayaashu waxay leeyihiin afar carruur ah: Estelle Deborah, Mitchel Dennis, Yasmin Naomi iyo Saffron Rita. Hoos waxaa ku qoran Dennis Bergkamp oo ah wiilkiisa koowaad iyo kan keliya.
Wiilka Dennis Bergkamp waa ciyaaryahan tayo leh, lakiin waxa uu u muuqdaa inuu ka ciyaari karo meel ka baxsan ciyaarta marka loo fiiriyo aabihiis, kaasoo kula saxiixday Ajax da 'da' '12'. Mitchel ayaa go'aansaday inuu xirfadiisa ciyaareed ka bilaabo heerka labaad ee kubada cagta Holland. Waxa uu qarka u saaran yahay inuu jabiyo boosaska kubada cagta ee kubada cagta.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Stats Stats
Waxaanu diyaarinnay stats for Lifebogger ee Denis Bergkamp. Fadlan calaamadee hoosta haddii ay ku habboon tahay waxaad ka fekereyso isaga.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Aviofobia
Dennis Bergkamp wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsi ahaantiisa.
Awoodiisa: Bukaanka, bukaanka, wax ku oolka ah, mid gaar loo leeyahay, mas'uulka ka ah oo aad u degan qoyskiisa.
Tabaryaradiisa: Aviophobia (cabsida duulimaadka diyaaradaha helikabta, diyaaradaha iyo gaadiidka kale ee duulaya)
Maxaa Dennis jecel yahay: Wuxuu jecel yahay beerka, karinta, muusikada, jacaylka, dharka tayo sare leh iyo gacan qabashada gacmo.
Maxay Dennis u tahay: Wuxuu necbaa ammaan darro nooc kasta,
Si kooban, Dennis waa mid wax ku ool ah, oo si fiican u dhisan, waana qof jecel in uu soo baxo midhaha shaqadiisa. Wuxuu dareensan yahay baahida loo qabo in lagu hareeriyo jacayl iyo qurux oo uu qoyskiisa iyo taageerayaashiisa isaga siinayo. Dennis waa mid jilicsan oo taabasho leh, wuxuuna tixgeliyaa taabashada iyo dhadhaminta sida ugu muhiimsan dareenkiisa. Waxa uu diyaar u yahay inuu adkaysto oo uu ku dhegto doorashadiisa ilaa uu gaaro heerka qancinta shakhsi ahaaneed.
Magaca naaneyska Bergkamp waa "Qofka aan duuliyaha lahayn ee Holland" sababtoo ah cabsida uu ka qabo duulimaadka. Tani waxay ka dhacdey dhacdo lala yeeshay xulka qaranka Netherlands ee koobka adduunka 1994 halkaas oo mashiinka diyaaradda ee duulimaadkii ku dhex jiray duulimaad, taas oo keentay in saxafiyiintu ay kaftamaan in bam ku jira boorsadiisa. Dhacdadan kadib, Bergkamp ayaa go'aansaday inuusan waligiis mar dambe duuli doonin laakiin wuxuu ka fikiray inuu raadsado caawimaad nafsi ah:
Dhibaatadan ayaan qabaa waana inaan la noolaadaa. Waxba kama qaban karo, waa wax maskaxiyan ah mana fahmi karo. Laba diyaaradood ma aanan duulin laba sano. Xiriirka kubada cagta Holland ayaa udubdhexaadiyay, sidaas darteed Arsenal haatan, ilaa iyo haatan. Waxaan tixgelinayaa kaalmada nafsiga ah. Anigu ma duuli karo. Anigu waan xiraa. Waan ka naxaa.
Xaaladda ayaa xaddideysa awooda uu u leeyahay inuu ciyaaro kulamo ka baxsan tartamada Yurub iyo inuu la safro xulka qaranka. Xaaladaha qaarkood, wuxuu ku safri lahaa baabuur ama tareen, laakiin sahayda cayaaraha qaar ayaa lahaa walbahaar aad u badan oo uusan ku socon karin.
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh -Hawlgab Dambe
Wuxuu ciyaaraha ka fariistay 2006, waxaana lagu soo gaba-gabeeyay Heerka Cagta Ingiriiska ee sannadka soo socda. Waxaa uu ahaa sharaf aad u sareeya tan iyo markii uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Dutch ah ee loo codeeyo. FIFA ayaa kaalinta koowaad ka gashay ciyaartoyda ugu sareysa 100, Arsenal ayaana ku jirta No. 2 oo ka mid ah boqolaal ciyaartoy oo maaliyaddooda ku darsaday.
Markii uu ka fariistay, Bergkamp wuxuu ku adkeystay inuusan u dhaqaaqi doonin tababare. Waxa uu diidey inuu dalab u diro Arsenal, islamarkaana uu diirada saaro safarka iyo inuu waqti la qaato qoyskiisa.
Si kastaba ha ahaatee, bishii April 2008, wuxuu bilaabay inuu si dhakhso ah u qaato diblooma tababaraha xulka qaranka ee kubada cagta Holland isla markaana uu tababar ku qaatay Ajax. Ka dib markii uu dhammeeyey tababarka Betaald Voetbal iyo inuu qaato dhowr tababaro, Bergkamp waxa loo magacaabay caawiyaha De Boer ee Ajax bishii August 2011.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta our Story Dennis Bergkamp Carthouse iyo xaqiiqda Lahaanshaha Biography. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Wareysiga kubadda cagta Holland
Sheeko caruureedka Ronaldinho Xogta loo yaqaan 'Biography'
Pele Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Xogta